Ngosi mmịfe Software maka Mavericks: Mee ngosi mmịfe na OS X Mavericks
> Resource> Video> ngosi mmịfe Software maka Mavericks: Mee ngosi mmịfe na OS X Mavericks
Apple ọhụrụ OS X Mavericks eweta 200+ ọhụrụ atụmatụ n'elu OS X 10,8 Mountain odum ma na-emekwa ka a ọtụtụ n'ime Mac-metụtara software gharazie ịba uru dị ka mma. A bụrụ na mgbe bụ Mac-dabeere ngosi mmịfe software. Ọ bụrụ na ị chọrọ ime ka a ngosi mmịfe na OS X 10,9 Mavericks ochie ngosi mmịfe eme software, na ọtụtụ oge ị ga-esi ihe ọ bụla, n'ihi na ndị dị otú ahụ a na-anaghị dakọtara na ọhụrụ Mavericks.
Bụ n'ebe a ngosi mmịfe software omume nke arụ ọrụ zuru okè na OS X 10,9 Mavericks? Na-agwa unu eziokwu, Fantashow for Mac bụ nanị ngwá ọrụ na-eje ozi gị mkpa. Kụziri site n'iji ịdị uchu na otu ìgwè, Wondershare Fantashow for Mac bụ mgbe niile emelitere-na-ijeụkwụ na Kacha ọhụrụ technology. N'ihi ya, ọbụna ma ọ bụrụ na i ọhụrụ gị sistemụ na-Mac OS X 10,9, nke a ngosi mmịfe eme software na-arụ ọrụ nke ọma na gị Mavericks. Ugbu a, ka anyị hụ otú na-eme ka ihe ngosi mmịfe na OS X Mavericks. O
1 Họrọ a ịke-amasị gị
Download na-agba ọsọ a ngosi mmịfe software maka Mavericks na banye. Preview ọtụtụ narị ekwekọghị categorized site dị iche iche idaha. Buru ọkacha mmasị gị na onye na pịa "Mee" na-amalite na-eme slideshows na OS X Mavericks.
2 hazie gị ngosi mmịfe
Mgbe ahụ ị ga-aga na "hazie" taabụ. Pịa "Media Nchọgharị" na họrọ gị video / foto / ọdịyo faịlụ site na kwekọrọ ekwekọ nchekwa. Mgbe ahụ ịdọrọ-n-dobe ha ka storyboard. Ọ bụrụ na ndị faịlụ mkpa edezi, nnọọ abụọ pịa bugharia, akuku ma ọ bụ tinye mmetụta na mmapụta elu window. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike itinye ihe odide na Intro / Ebe E Si Nweta ka zuo ezu ngosi mmịfe na-eme ka uche na isiokwu. Iji mee ndị a, dị nnọọ ịgbanwee gaa na ederede na Intro / Ebe E Si Nweta taabụ.
NDỤMỌDỤ: n'oge usoro a, ị nwere ike ịgbanwe ịke site na ịpị "Change" na akara ngosi na ịke na ị na-ahọrọ ọzọ ịke. Ọ bụrụ na ị chọrọ ngosi foto ma ọ bụ vidiyo na ihe karịrị otu ịke, pịa "Tinye ọhụrụ ịke" ịgbakwunye ọzọ.
3 Zọpụta ma ọ bụ ịkọrọ gị ngosi mmịfe
Mgbe na-eme gị ihe ngosi mmịfe, gaa na "Share" taabụ. Fantashow Enye anọ nhọrọ n'ihi unu:
"Social" taabụ: Kpọmkwem ịkọrọ gị ngosi mmịfe ka Facebook ma ọ bụ YouTube;
"Obodo" taabụ: Zọpụta gị vidiyo ka ọkọlọtọ ma ọ bụ elu-edu niile na-ewu ewu formats;
"Devices" taabụ: Nyefee video gị na ngwaọrụ dị ka iPhone, iPad, Galaxy, HTC;
"DVD" taabụ: Họrọ mwube site onwe gị na ozugbo ọkụ ka DVD
Ị na-ahụ na-eme ihe ngosi mmịfe na Mavericks bụ otú mfe na Fantashow for Mac. Na a nnukwu iche iche nke okike ngosi mmịfe ekwekọghị, animated Intro / Ebe E Si Nweta na ahaziri soundtracks, ị ga-enwe ike ike ọrụ nkà na Mavericks!
Olee otú Mee a DVD ngosi mmịfe
Olee otú Mee a ngụsị akwụkwọ Video ngosi mmịfe
Olee otú Mee a Foto dị ngosi mmịfe na Mac / PC
Top 10 movie4k ka uzo ozo n'ihi na ị
Top 10 Atụmatụ digitize 8mm Videos
Genial ụzọ ịkpọghee Youku on Computer na ekwentị mkpanaaka
Desktọpụ vs Online MKV Ntụgharị
Olee otú Record Voice na gị Kọmputa enweghị Ogo Loss
Olee otú Download AVI Videos